OTU ESI ETINYE SSD KAMA DVD NA LAPTỌỌPỤ - SSD - 2019
Mgbe ị na-arụ ọrụ na Excel, ụfọdụ tebụl ruru ogo buru ibu. Nke a na-eme ka eziokwu ahụ dịkwuo elu, mgbe ụfọdụ ọ na-eru ọbụna megabytes iri na abụọ ma ọ bụ karịa. Mbelata nke ngwa akwụkwọ Excel na-eduga ọ bụghị nanị na mmụba nke ohere ọ na-adị na diski ike, mana, nke ka mkpa, iji mee ka ngwa ngwa nke mmebi omume na usoro dị iche iche dị n'ime ya. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, mgbe ị na-arụ ọrụ dị otú ahụ, Excel malitere ịkwụsịlata. Ya mere, okwu nke ịchọta na ibelata akwụkwọ ndị dị otú ahụ na-adị ngwa ngwa. Ka anyị lee otú ị nwere ike isi belata ụda faịlụ na Excel.
Usoro maka iwelata nha akwụkwọ ahụ
Kwalite faịlụ a gbasaa ga-abụ n'ọtụtụ ntụziaka ozugbo. Ọtụtụ ndị ọkachamara adịghị eche, ma mgbe mgbe akwụkwọ mpịakọta Excel nwere ọtụtụ ozi na-enweghị isi. Mgbe faịlụ dị ntakịrị, ọ dịghị onye na-elebara anya ya anya, mana ọ bụrụ na akwụkwọ ahụ na-agwụ ike, ịkwesịrị ịkwalite ya na mpaghara niile.
Usoro 1: belata ọrụ ọrụ
Ebe ọrụ na-arụ ọrụ bụ Excel na-echeta ihe ndị ahụ. Mgbe ị na-edeghachi akwụkwọ, usoro ihe omume ahụ na-agbagha mkpụrụ ndụ niile nke na-arụ ọrụ. Ma, ọ bụghị mgbe niile na-edekọ na njirimara nke onye ọrụ ahụ na-arụ ọrụ n'ezie. Dịka ọmụmaatụ, ebe a na-amaghị nke ọma n'okpuru okpokoro ahụ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ nke ọrụ na-arụ ọrụ na ebe mmewere dị. Ọ na-apụta na mgbe a na-emegharịghachi, Excel ga-edozi ụyọkọ mkpụrụ ndụ efu na oge ọ bụla. Ka anyị lee otú ị ga - esi edozi nsogbu a site na ihe atụ nke tebụl dị.
Nke mbụ, lelee ịdị arọ ya n'ihu njikarịcha, iji tụnyere ihe ọ ga-abụ mgbe usoro ahụ gasịrị. Enwere ike ime nke a site n'ịga na tab "Njikwa". Gaa na ngalaba "Nkọwa". N'akụkụ aka nri nke windo mepere emepe, e gosipụtara ihe ndị bụ isi nke akwụkwọ ahụ. Ihe mbụ nke ihe onwunwe bụ ụdị akwụkwọ ahụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, na nke anyị, ọ dị 56.5 kilobytes.
Mbụ, ị ga-achọpụta otú ezigbo ọrụ-arụmọrụ nke mpempe akwụkwọ dị iche na nke onye ọrụ chọrọ n'ezie. Nke a dị mfe ime. Anyị na-abanye na cell ọ bụla nke tebụl ma pịnye igodo ahụ Ctrl + Ọgwụgwụ. Excel ozugbo na-agaga na cell ikpeazụ, nke usoro ahụ weere dị ka njedebe ikpeazụ nke na-arụ ọrụ. Dị ka ị nwere ike ịhụ, na ikpe anyị, nke a bụ akara 913383. Nyere na tebụl ahụ nwere naanị isii nke isii, a pụrụ ikwu na ihe 913377 bụ, n'ezie, ọrụ na-abaghị uru, nke ọ bụghị nanị na-eme ka ụda faịlụ ahụ dị elu, ma, n'ihi Ntughari oge niile nke usoro ihe omume ahụ mgbe ị na-eme ihe ọ bụla, na-eduga n'ịdị ngwa n'ọrụ na akwụkwọ ahụ.
N'ezie, n'eziokwu, nnukwu ọdịiche ahụ dị n'etiti ọrụ ọrụ ahụ na Excel na-ewe maka ya dị obere, anyị weere ọtụtụ ọnụọgụ maka nghọta. Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, e nwere ọbụna ikpe mgbe a na-ewere mpaghara dum nke akwụkwọ a dịka ebe ọrụ.
Iji dozie nsogbu a, ịkwesịrị ihichapụ ihe niile ahụ, na-amalite site na ihe efu mbụ ma na njedebe nke mpempe akwụkwọ ahụ. Iji mee nke a, họta cell mbụ, nke dị n'okpuru okpokoro ahụ, ma pịnye igodo ahụ Ctrl + Ọpụpụ + Ala Gaa.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, mgbe nke ahụ gasịrị, a họọrọ ihe niile nke kọlụm mbụ, malite na cell ahụ a kapịrị ọnụ na ruo na njedebe nke tebụl. Wee pịa bọtịnụ òké aka na ọdịnaya ahụ. Na nchịkọta nhọrọ na-emeghe, họrọ ihe ahụ "Hichapụ".
Ọtụtụ ndị ọrụ na-anwa ihichapụ site na ịpị bọtịnụ ahụ. Hichapụ na keyboard, ma nke a ezighi ezi. Omume a na-ekpuchi ọdịnaya nke mkpụrụ ndụ ahụ, mana anaghị ehichapụ ha onwe ha. Ya mere, n'ọnọdụ anyị ọ gaghị enyere aka.
Mgbe anyị họpụtara ihe ahụ "Hichapụ ..." na onodu ozo, obere obere iwepu window mepee. Anyị na-etinye ya na mgbanwe na ọnọdụ "Eriri" ma pịa bọtịnụ ahụ "OK".
E ehichapụla akara niile nke nhọrọ ahọrọ. Jide n'aka na iweghachị akwụkwọ ahụ site na ịpị akara ngosi diskette na akuku aka ekpe nke windo ahụ.
Ugbu a ka anyị lee otú o si nyere anyị aka. Họta cell ọ bụla na tebụl ma pịnye ụzọ mkpirisi Ctrl + Ọgwụgwụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, Excel họọrọ sel ikpeazụ nke tebụl, nke pụtara na ọ bụ ugbu a ihe ikpeazụ nke na-arụ ọrụ na mpempe akwụkwọ ahụ.
Ugbu a anyị na-aga na ngalaba "Nkọwa" taabụ "Njikwa"iji chọpụta ókè a na-ebelata akwụkwọ anyị. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ugbu a 32.5 KB. Cheta na tupu usoro nyochacha, nha ya dị 56.5 KB. N'ihi ya, ọ bụ ihe karịrị ugboro 1.7 belata. Ma na nke a, isi nchịkwa abụghị ọbụna mbenata nke ibu faịlụ ahụ, mana eziokwu ahụ bụ na enwerela ihe omume a ugbu a site n'ịkọpụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ejighi ya rụọ ọrụ, nke ga-eme ka ọsọ ọsọ nhazi ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na akwụkwọ ahụ nwere ọtụtụ eserese nke ị na-arụkọ ọrụ, ịkwesịrị ime usoro yiri ya na nke ọ bụla n'ime ha. Nke a ga-eme ka ibelata akwụkwọ ahụ.
Nzọụkwụ 2: wepu usoro nhazi
Ihe ọzọ dị mkpa nke na-eme ka akwụkwọ Excel dị arọ bụ redundant formatting. Nke a nwere ike ịgụnye iji ụdị dị iche iche, ala, usoro ọgụgụ, ma na mbụ, ọ na-eche banyere njupụta nke mkpụrụ ndụ nwere agba dị iche iche. Ya mere, tupu i dezie faịlụ ahụ, ị ​​ga-eche echiche ugboro abụọ, na ma ọ bara uru iji mee ya, ma ọ bụ na enweghị usoro a, ị nwere ike ime ya ngwa ngwa.
Nke a bu eziokwu nke akwukwo ndi nwere otutu ihe omuma, nke ha onwe ha nwere otutu. Ịtinye nhazi na akwụkwọ nwere ike iweli ibu ya ọtụtụ ugboro. Ya mere, ọ dị mkpa ịhọrọ "ọlaedo pụtara" n'etiti nhụwapụta nke ozi dị na akwụkwọ ahụ na ntinye faịlụ, iji tinye nhazi naanị ebe ọ dị mkpa n'ezie.
Ihe ọzọ metụtara usoro nhazi, ịdị arọ, bụ na ụfọdụ ndị ọkacha mmasị na-ahọrọ ịkpụ mkpụrụ ndụ "nwere oke." Nke a bụ, ha na-akọwapụta na ọ bụghị nanị na tebụl n'onwe ya, kamakwa nke dị n'okpuru ya, mgbe ụfọdụ ọbụna ruo na njedebe nke mpempe akwụkwọ ahụ, na-atụ anya na mgbe agbakwunyere ọhụụ ọhụrụ na tebụl, ọ gaghị adị mkpa iji hazie ha ugboro ọ bụla.
Ma, a maghị kpọmkwem mgbe a ga-atụkwasị ọhụụ ọhụrụ na ole mmadụ ga-agbakwunye, na nhazi usoro dị otú ahụ ị ga-eme faịlụ ahụ ugbu a, nke ga-enwe mmetụta dị njọ na ọsọ ọrụ na akwụkwọ a. Ya mere, ọ bụrụ na i tinyela usoro nhazi na mkpụrụ ndụ efu ndị na-adịghị etinye na tebụl, ị ghaghị iwepụ ya.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịhọrọ mkpụrụ ndụ niile dị n'okpuru ebe a na data ahụ. Iji mee nke a, pịa ọnụọgụ nke akara eriri mbụ na mpaghara nhazi ihuenyo. E gosipụtara akara dum. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-eji ihe nchịkọta ọkụ dị ọkụ nke anyị maara. Ctrl + Ọpụpụ + Ala Gaa.
Mgbe nke ahụ gasịchara, a na-eme ka akụkụ data dị iche iche dị n'okpuru akụkụ nke tebụl jupụtara na data. Ịbụ na taabụ "Home" pịa akara ngosi ahụ "Kọwaa"nke dị na teepu na ngọngọ nke ngwaọrụ Na-edezi. A obere menu mepee. Họrọ ọnọdụ na ya "Usoro doro anya".
Mgbe emechara ihe a na mkpụrụ ndụ niile nke nhọrọ ahọrọ, a ga-ewepụ nhazi ahụ.
N'otu ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike wepu nhazi usoro na-adịghị mkpa na tebụl n'onwe ya. Iji mee nke a, anyị na-ahọrọ mkpụrụ ndụ ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ebe anyị na-atụle nhazi ka ọ bụrụ ntakịrị uru, pịa bọtịnụ. "Kọwaa" Na teepu na site na ndepụta ahụ, họrọ ihe ahụ "Usoro doro anya".
Dị ka ị pụrụ ịhụ, a kpochapụrụ kpamkpam formatting na nhọrọ dị iche iche nke tebụl.
Mgbe nke ahụ gasị, anyị na-alaghachi na nke a ụfọdụ usoro nhazi nke anyị weere dị ka ihe kwesiri ekwesịrị: ala, nhazi usoro, na ihe ndị ọzọ.
Ihe ndị a dị n'elu ga - enyere aka belata akwụkwọ akwụkwọ Excel ma mee ka ọrụ ahụ dị elu. Ma, ọ ka mma ịmalite ịhazi usoro naanị ebe ọ dị ezigbo mkpa ma dị mkpa, karịa iji oge na-emezi ihe ederede.
Ihe Ọmụmụ: Ịhazi Ụdị Excel
Nzọụkwụ 3: ehichapụ njikọ
Na ụfọdụ akwụkwọ, ọtụtụ ọnụ ọgụgụ njikọ, site na ebe ụkpụrụ na-adọta. Nke a pụkwara ime ka ngwa ngwa kwụsị ọrụ. Mmetụta ndị ọzọ na akwụkwọ ndị ọzọ na-emetụta ọhụụ a n'ụzọ siri ike, ọ bụ ezie na njikọ nke ụlọ nwere mmetụta ọjọọ na ọsọ. Ọ bụrụ na njikọ ahụ nke njikọ ahụ na-ewe ozi ahụ anaghị emelite ya mgbe nile, ya bụ, ọ bụ ihe ezi uche dochie anya adreesị ịdebanye na mkpụrụ ndụ ndị nwere ụkpụrụ nkịtị. Nke a nwere ike ime ka ọsọ ọsọ rụọ ọrụ na akwụkwọ ahụ. Ị nwere ike ịhụ ma njikọ ma ọ bụ uru dị na cell ahụ; ị nwere ike n'ime usoro mmanya ahụ mgbe ị na-ahọrọ mmewere ahụ.
Họrọ mpaghara nke nwere njikọ. Ịbụ na taabụ "Home", pịa bọtịnụ "Detuo" nke dị na ribọn ahụ na mpaghara ntọala "Mbadamba".
N'aka nke ọzọ, mgbe ị na-ahọrọ elu ahụ, i nwere ike iji nchikota igodo ọkụ. Ctrl + C.
Mgbe anyị depụtachara data ahụ, ewepụla nhọrọ si n'ógbè, ma pịa bọtịnụ òké aka ya. A na-emepụta ihe ndị na-ekwu gburugburu. Na ya na ngọngọ ahụ "Nhọrọ Ntinye" chọrọ pịa akara ngosi ahụ "Ụkpụrụ". Ọ dị ka eserese na ọnụ ọgụgụ ndị e gosiri.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-eji ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ dochie njikọ niile na mpaghara ahọrọ.
Ma, a ghaghị icheta na nhọrọ a nke ịmepụta akwụkwọ ọrụ Excel adịghị anabata ya mgbe niile. Enwere ike iji ya naanị mgbe data site na isi mmalite ahụ adịghị ike, ya bụ, ha anaghị agbanwe oge.
Usoro 4: mgbanwe usoro
Ụzọ ọzọ ị ga-esi belata nha faịlụ bụ ịgbanwe usoro ya. Usoro a nwere ike inye aka karịa ndị ọzọ niile ka ha depress akwụkwọ, ọ bụ ezie na nhọrọ ndị a dị n'elu ga-ejikwa ya mee ihe.
Na Excel, e nwere ọtụtụ faịlụ "ala" - xls, xlsx, xlsm, xlsb. Ụdị xls bụ ntọala isi maka mbipụta nke Excel 2003 na mbụ. Oge agafeela, mana, ọtụtụ ndị ọrụ ka na-etinye n'ọrụ. Na mgbakwunye, enwere ikpe mgbe ị ga-alaghachi na-arụ ọrụ na faịlụ ochie ndị e kere ọtụtụ afọ gara aga ọbụna n'oge ndị enweghị usoro ọgbara ọhụrụ. Ọ bụghị ịkọwa eziokwu ahụ na ọtụtụ mmemme nke atọ ndị na-amaghị otú e si eji nsụgharị nke Excel akwụkwọ na-arụ ọrụ na akwụkwọ ndị a.
O kwesiri ighota na akwukwo nke xx gbakwasiri nwere okpukpu karia ihe omuma nke oge a nke uzo xlsx, nke Excel na ejizi dika isi. Nke mbụ, nke a bụ n'ihi n'eziokwu na faịlụ xlsx, n'eziokwu, na-ejikọta archives. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eji ndọtị xls, mana ịchọrọ iwelata ibu akwụkwọ ahụ, mgbe ahụ, a ga-eme nke a nanị site n'ịgbado ya na usoro xlsx.
Iji tọghata akwụkwọ site na nhazi xls na nhazi nke xlsx, gaa na taabụ "Njikwa".
Na windo nke mepee, ozugbo leba anya na ngalaba "Nkọwa"ebe e gosiputara na ugbu a, ibu nke akwụkwọ ahụ bụ 40 Kb. Ọzọ, pịa aha "Zọpụta Dị ka ...".
A na-azọpụta windo mepee. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịga ndekọ ọhụrụ na ya, ma maka ọtụtụ ndị ọrụ, ọ dị mfe iji chekwaa akwụkwọ ọhụrụ ahụ n'otu ebe ahụ dịka isi iyi. Aha akwụkwọ, ma ọ bụrụ na achọrọ, nwere ike gbanwere na "Njikwa Aha", ọ bụ ezie na ọ bụchaghị. Ihe kachasị mkpa na usoro a bụ itinye n'ọhịa "Ụdị Njikwa" pụtara "Akwụkwọ ọrụ Excel (.xlsx)". Mgbe nke ahụ gasịrị, ịnwere ike pịa bọtịnụ ahụ "OK" na ala nke windo ahụ.
Mgbe a na-azoputa ya, gaa na ngalaba "Nkọwa" taabụ "Njikwa", iji hụ ókè ibu dị arọ. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ugbu a 13.5 KB megide 40 KB tupu usoro ntughari. Nke ahụ bụ, naanị otu nchebe na usoro nke oge a nyere anyị ike ịpịakọta akwụkwọ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugboro atọ.
Tụkwasị na nke a, na Excel, e nwere usoro usoro xlsb nke oge a ma ọ bụ akwụkwọ ọnụọgụ abụọ. N'ime ya, a na-edebe akwụkwọ ahụ na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ. Ihe ndị a na-atụle ọbụna obere akwụkwọ xlsx. Tụkwasị na nke ahụ, asụsụ nke edere ha bụ nke kachasị mma na Excel. Ya mere, ọ na-arụ ọrụ dị otú ahụ ngwa ngwa karịa na mgbakwunye ọzọ. N'otu oge ahụ, akwụkwọ nke usoro a kapịrị ọnụ maka usoro ọrụ na ohere nke iji ngwaọrụ dịgasị iche iche (nhazi, ọrụ, eserese, wdg) abụghị dị ala karịa usoro xlsx karịa karịa usoro nchịkọta xls.
Isi ihe mere xlsb aghọghị ụdị ndabara na Excel bụ na mmemme ndị ọzọ ahụ adịghị arụ ọrụ na ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ibupụ ozi si Excel gaa na 1C, a ga-eme ya na xlsx ma ọ bụ xls akwụkwọ, ma ọ bụghị xlsb. Ma, ọ bụrụ na ịghị eme atụmatụ ịnyefe data gaa na mmemme ọ bụla ọzọ, mgbe ahụ ịnwere ike ịchekwa akwụkwọ ahụ n'enweghị ihe ọ bụla na ngwugwu xlsb. Nke a ga - eme ka ị belata nha akwụkwọ ahụ ma mee ka ọsọ ọsọ rụọ ọrụ na ya.
Usoro maka ịchekwa faịlụ na ntinye xlsb yiri nke anyị mere maka mgbatị xlsx. Na taabụ "Njikwa" pịa ihe "Zọpụta Dị ka ...". Na windo meghere kpuchie na ubi "Ụdị Njikwa" chọrọ ịhọrọ nhọrọ "Akwụkwọ ọrụ ọnụọgụ abụọ Excel (* .xlsb)". Wee pịa bọtịnụ ahụ. "Chekwa".
Anyị na-ele ibu arọ nke akwụkwọ ahụ na ngalaba ahụ. "Nkọwa". Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịkwuola ọbụna karịa ma ọ bụ ugbu a naanị 11.6 KB.
N'ịkọwa, anyị nwere ike ikwu na ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na faịlụ na usoro, ụzọ kachasị mma iji belata nha ya bụ ịchekwa na ụdị xlsx ma ọ bụ xlsb ugbu a. Ọ bụrụ na ị na-eji ndọtị faịlụ ndị a eme ihe, mgbe ahụ iji belata ibu ha, ị kwesịrị ịhazi mpaghara wọkspeesi, gbanwee usoro nhazi na enweghị njikọ. Ị ga-enweta nlọghachi kasịnụ ma ọ bụrụ na ịmee omume ndị a niile dị mgbagwoju anya, ma ghara itinye aka na otu nhọrọ.